musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani dhiziri jenareta seti yakaziviswa neGenerac Mobile
Generac Mobile, inotungamira kugadzira nhare dzemagetsi enhare, majenareta, maheater, pombi uye zvigadziriso zveguruva, nhasi yazivisa kuunzwa kwemayuniti maviri makuru edhiziri - iyo MDE330 neMDE570 majenareta edhiziri, ayo ane chinangwa chekupa nyore kushanda nekugadzirisa. . Michina yakagadzirira kurojesa inoratidzira magonhi akavhurika akakura anobviswa kuti awedzere kushanda nekubvumira nyanzvi kuti isvike nyore nyore nzvimbo dzese dzesevhisi. Iyo yakaonda simbi dhizaini uye kuvaka inobvumira kushanda kune zvakasiyana-siyana zvekushandisa, zvisinei nemamiriro ekunze.
Iyo MDE330 inoratidzira 9.3L Perkins Tier 4 Final-yakasimbiswa injini, nepo MDE570 inoshandisa 18.1L Perkins Tier 4 Final-yakasimbiswa injini. Mainjini ese ari maviri anopa akajairwa Perkins Exhaust Temperature Management (ETM) mutoro wekutarisira tekinoroji, kubvisa nyaya yekunyorova kurongedza panguva yakaderera-uye isina-mutoro mamiriro, izvo zvinogona kuitika kana jenareta redhiziri rakakura zvisina kufanira kana kuwandisa pabasa. Injini dziri muGenerac's MDE330 itsva uye MDE570 dzakagadzirirwa kudzivirira kunyorova nekutarisa uye kudzora tembiricha yekuburitsa injini uye nekupa kuwedzera kupisa, sezvinodiwa.
"Generac Mobile inopa simba rakavimbika rinoenda kwaunoda, richipa vatengi kuita zvinhu zvakasiyana-siyana uye kutonga kuti basa riitwe - pese pazvingave," akadaro Aaron LaCroix, maneja wechigadzirwa, Generac Mobile. "Kuburikidza nemagadzirirwo emhando yepamusoro uye madhizaini asingadyi mafuta, mayuniti edu anobvumidza kuti iwedzere nguva yekumhanya uye yenguva refu yebasa kuitira kuti ugone kugara pabasa nguva refu, nekuwedzerwa mafuta uye kugadzirisa."
Generac's MDE330 uye MDE570 inouya yakajairwa ne500-awa yemafuta uye kusefa sevhisi nguva yekudzikisira kugadzirisa uye kudzikira nguva. Huru huwandu hwemafuta uye matangi eDEF anobvumira nguva yekumhanya kweanenge maawa makumi maviri nemashanu isati yadiwa kuwedzera, kuwedzera kudzoka pakudyara.
Optional features zvinosanganisira kuwedzera mota yekutanga kugona, kutonhora kwemamiriro ekunze kits uye mamwe magetsi ekugovera sarudzo. Kuti zvive nyore kuchinjika, aya mayunitsi anogona kugadzirwa kuti aenderane, achigonesa nzira inotyisa kune simba.
Iyo PowerZone® Pro Sync controller inouya yakajairwa pamayuniti ese ari maviri, ichibvumira mushandisi kutarisa mashandiro uye kuita diagnostics payuniti. Iyo controller inowanikwa zviri nyore kuseri kwemuchina anenge 5 tsoka, 6 inches kubva pasi pane trailer vhezheni kuti uwane nyore. Iyo PowerZone® Pro Sync controller inoisa ese madhiraivha emuchina uye ruzivo munzvimbo imwechete, mune iri nyore kushandisa ruvara rwekubata-bata skrini inoratidza iyo yekuongorora makodhi uye ruzivo runobatsira.
Iyo MDE330 itsva uye MDE570 ichave iripo pakuodha uye kutora muQ4 2021 uye ichave iripo kuti itumire muQ2 2022.